Barakac Ka Bilaawday Xaafado Katirsan Degmada Beled-Xaawo – Great Banaadir
Wararka laga helayo Degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi laga dareemayo barakac ay sameeynayaan qaar kamid ah Shacabka ku nool degmadaas.
Xaafadaha Degmada Beled-Xaawo ee laga barakacay ayaa waxaa kamid ah Xaafadaha Qansax Barwaaqo, Xashawe iyo Dhabad, kuwaas oo la sheegay in dadka badi ay ka barakaceen.
Dad ku sugan Degmada Beled-Xaawo ayaa Risaala waxaa ay u sheegeen in Gudaha Degmada iyo dhinaca Magaalada Mandheera lag dareemayo abaabul dagaal gaar ahaan goobta ay ku sugan yihiin ciidamadii horay looga saaray Beled-Xaawo ee Jubbaland.
Xiisada dagaal iyo barakaca ka bilaawday Degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli maanta Dowladda Soomaaliya qoraal ay soo sartay ay ku sheegtay in Dowladda Kenya ay Jabhad ku hubeyneyso Duleedka Mandheera, si ay u soo weeraraan Degmada Beled-Xaawo.
Raysal Wasaaraha Sweden Oo Karantiin Is Geliyay